Ross Barkley oo ku tilmaamay saaxiibkiis Eden Hazard xidiga ugu wanaagsan aduunka xiligan la joogo – Gool FM
Ross Barkley oo ku tilmaamay saaxiibkiis Eden Hazard xidiga ugu wanaagsan aduunka xiligan la joogo
Dajiye September 27, 2018
(Chelsea) 27 Sab 2018. Laacibka reer England ee Ross Barkley ayaa si xoogan u amaanay qaab ciyaareedka uu sameenayo xiligan la joogo saaxiibkiis Eden Hazard, kadib guushii ay kaga gaareen Liverpool koobka Carabao Cup-ka.
Ross Barkley ayaa dhinaca kale ku tilmaamay in Eden Hazard uu xiligan yahay xidiga ugu fiican aduunka isla markaana uu ka sareeyo xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
“Waxa uu Eden Hazard ka sameeyay kulankii Liverpool layaab naguma noqonin, sababtoo ah maalin kasta ayuu ku sameeyaa tababarka kooxda”.
“Waa kan ugu fiican aduunka xiligan la joogo sida aan aaminsanahay, wuxuu is badal ku sameyn karaa daqiiqad kasta ee ciyaarta ka tirsan”.
“Hazard wuxuu cadeeyay inuu ka mid yahay saddexda xidig ee xiligan ugu fiican kubada cagta, xiligan la joogo waxaa laga yaabaa in xitaa uu yahay kan ugu fiican aduunka, marka loo fooriyo waxa uu ka sameenayo garoomada”.
AFEEF HORE LAHAAW AMA ADKEYSI DAMBE: Pique oo Evra ka Gubay KABO Gaar ah ay ku qoranaayeen Magacyada Caruurtiisa...(Maxaase ka raacay hee!!)